जिवनको एक मात्र लक्ष्य संगित हो – रोकाया::त्रिशुलीखवर
राष्ट्रिय सम्मानले जिम्मेवारी थपिएको छ । आफु सम्मानित हुँदा कर्णाली सम्मानित भए झैँ लाग्यो । यस बर्षको म्युजिक क्षेत्रको सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रिय अवार्ड म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डबाट सम्मानित हुने युवा प्रतिभा हुन् कर्णालीको जुम्लाका पदम रोकाया। करिब १५ वर्ष लामो सांगतिक जिवनमा करिब डेढ शय गितहरुमा शब्द, संगीत, गायन र मोडलिङ समेत गरेका रोकाया यस्तो सम्मान प्राप्त गर्ने कर्णाली अञ्चल कै पहिलो व्यक्ति पनि हुन् । प्रस्तुत छ ः युवा गितकार एंव संगितकार रोकायासँग त्रिशुलीखबर डटकमका नरेस न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त सांगितीक वार्तालाप ः
यस वर्षको म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डबाट सम्मानित हुँदा तपाइलाई कस्तो लागिरहको छ ।
यसरी जीवनमा पहिलो पटक राष्ट्रिय एवं चर्चित अवार्डबाट सम्मानित हुदाँ मलाई निकै खुशि लाग्यो । आफ्नो १५ वर्ष लामो सांगीतिक यात्रामा यो अवार्डले मात्रै होइन मेरो जन्म थलो कर्णाली सम्मानित भएको महशुस गरेको छु । यस सम्मानले मेरो जिवनलाई संगितिमा समाहित गरेको छ । म र संगित एक अर्काको प्रयाँय भएको पुष्टि भए जस्तो लाग्छ । वास्तवमा वाकि जिवन संगित क्षेत्रमा विताउने प्रेरणा र उर्जा सम्मानले थपेको छ ।
तपाइलाई यति चर्चित म्युजिक अवार्डबाट सम्मानित हुन सक्छ, जस्तो लागेको थियो ?
म बाल्यकाल देखी नै संगीतिक यात्रामा सामेल भए पनि यति छिट्टै अथवा किशोर अवस्थामा न यस्तो सम्मान पाइहाल्छु जस्तो पक्कै पनि लागेको थिएन् । तर मैले आफ्नोे क्षेत्रमा राम्रै गरिरहेको छु भन्ने चाहि विश्वस्थ थिएँ । एक दिन उपर्युक्त कामको उपयुक्त समयमा मुल्याङकन भएरै छोड्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । यस सम्मानले वास्तवमा मेरो काधँमाथी झन राम्रो गर्ने जिम्मेवारी थपेको अनुभुति गरेको छु । मलाई अझ राम्रो गर्नुपर्ने चुनौति थपिएको छ ।
तपाईलाई यो सम्मान दिलाउने शिर्ष गितहरुबारे बताइदिनोस् न ?
मैले, मेरो करिब १५ वर्ष लामो सांगितिक जीवनमा करिब डेढ सय गितमा कहि संगित, कहि शब्द, कहि मोडलिङ त काँहि गाउने काम पनि गरेको छु म व्यक्तिगत रुपमा भने सबै प्रयासहरुबाट सन्तुष्ट नै छु । यधपी सायद यस्तो गौरवशाली अवार्डबाट सम्मानित गराउन भुमिका खेल्ने गितहरु चाहि अन्जु पन्तको स्वरमा रहेको धोका दिने धोके बाज, प्रमोद खरेलको तिमी देखि टाढा बन्न ,प्रमोद खरेल कै जिन्दगीमा तिमी थियौं ,स्मृती शाहीको माया गर्ने जीवन साथी, प्रमोद खरेलकै मुटु भित्र लगायत दुइ दर्जन जति गितहरु छन् ।
अगाडिको सांगीतिक यात्राबारे के सोचिरहनु भएको छ ?
यो वास्तावमा अन्यत्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने नेपाली सांगितिक क्षेत्रबाट कतिपय सांगितकारहरु टिक्न नसकिरहेको तितो सत्य हाम्रा सामु छ । म त झन् यस क्षेत्रमा क्रियाशिल एक नवयुवक मात्र हुँ । आफ्नो आँखाले अनुभवि संगितकारको हालत पनि देखेको छु । त्यस कारण आफ्नो भविष्यको सांगीतिक यात्राबारे म निकै चिन्तीत पनि छु । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने संगित अव मेरो जिवनको प्रयावाची वनि सकेको छ । म सम्भवत ः संगित बिना, पानी बिनाको माछा जस्तै हुन्छ । मेरो जीवनको एकमात्र लक्ष्य संगीत हो र भविष्यमा यहि हुनेछ ।
अन्यत्यमा तपाईको अहिलेको व्यस्तताबारे केहि बताइदिनोस्न न ?
यति बेला म अस्ति भखेरै गठन भएको कर्णाली कलाकार समाजको अध्यक्षको हकमा क्रियाशिल छु । शब्द र संगितमा रहेका करिब ६÷७ वटा नयाँ गितहरु बजारमा आउने क्रममा छन् । यसरी मेरो वर्तमान समय गित संगित कै संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा नयाँ गितहरु कम्पोज गर्ने काम मै वितिरहेको छ ।